Mukhtaar Roobow oo Diyaarad keentay Muqdisho iyo Wararkii ugu danbeeyay - Hablaha Media Network
Mukhtaar Roobow oo Diyaarad keentay Muqdisho iyo Wararkii ugu danbeeyay
HMN:- Diyaarad sida Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ay goor dhow ka soo duushay, magaalada Xudur ee gobolka Bakool, waxaana laga soo dejiyey magaalada Muqdisho.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed iyo Taliye kuxigeenka NISA Jaamac ayaa la sheegay inay diyaarada la saarnaayeen Sheekh Mukhtaar Roobow Cali oo saaka isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa diyaar garow ugu jirta sidii Wadaadkan ka fallaagoobay Al-Shabaab u soo dhoweyn laheyd, waxaana la filayaa inuu magaalada Muqdisho uu ka dhaco kulan u dhaxeeya Mukhtaar Roobow iyo dowladda Soomaaliya.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in kulamada laga soo saari doono war murtiyeed uu Sheekh Mukhtaar Roobow ku cadeynayo mowqifka uu ka istaagay Al-Shabaab.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed ayaa sheegay in Abuu Mansuur uu diyara u yahay inuu Al-Shabaab ka saaro deegaanada maamulkooda.
Wadaadkan ayaa wada hadalo muddo soo socday kaddib, waxaa laga saaray liiska wax loogu yeero Argagixisada iyo lacagihii madaxiisa la dul saaray, kaddib markii uu ka baxay Kooxda Al-Shabaab sanadkii 2013, xilligaasoo isaga iyo saraakiil kale ay ka soo horjeesteen Hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Godane.